Izy ireo dia mahavita manodinkodina ny rafitra fiarovana ID Touch an'ny iPhone 5S | Vaovao IPhone
Ny zava-baovao ao amin'ny iPhone 5S dia ny rafitra Touch ID, izay ahafahanao mamaha ny fitaovanao amin'ny dian-tànanao. Ity fampiasa ity dia tsy ampiasaina amin'ny famohana fotsiny, fa koa mba hahafantarana ny tenanao ao anatin'ny App Store, io fantsom-pifandraisana io dia mifandray amin'ny Apple ID anao, ary afaka hividy atiny ao amin'ny iTunes ianao na ao amin'ny App Store nefa tsy mila mampiditra ny teny miafinao lava , amin'ny rantsan-tànanao fotsiny. Eny, tsy naharitra ela izy ireo hanodinana ity rafitra ity, araka ny nasehon'ny mpijirika Alemanina (Computer Chaos Group). Saingy mifanohitra amin'izay voalaza amin'ny toerana maro hafa, tsy fanapahana ara-dalàna izany, fa kosa mba "hialana" amin'ny rafitra, mampiasa fomba an-trano izay mety amin'ny rafitra rehetra izay mampiasa ny dian-tànana ho fomba famantarana.
Ny fomba dia "tena tsotra": ny sarin'ny dian-tànanao dia alaina eo ambonin'ny vera misy vahaolana 2400dpi. Ny sary dia tsaboina amin'ny fanadiovana, mivadika ary natonta amin'ny vahaolana 1200dpi amin'ny taratasy mangarahara. Apetaho ny lakax na laka fotsy, ary miandry azy ho maina. Rehefa maina dia esorina ilay latsa-kazo na lakaoly, ary ny vokatra dia "hoditra faharoa" misy ny dian-tananay izay mamela anao hampiasa azy, araka ny aseho amin'ny horonantsary.
Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, tsy ny rafitra no voajirika, marina dia nampiasa fomba taloha hanamboarana ny dian-tanan'ny rantsantanana, azo antoka fa nisy olona nahita tamin'ny sarimihetsika nataon'ny polisy indraindray. Fa na izany aza, ny filaminan'ny rafitra no resahina. Azo antoka ve ity rafitra ity hitantanana ny fividiananao amin'ny iPhone anao? Ny rindranasa fampidinana ny dian-tananareo ihany no avelanao ho ao amin'ny App Store? Touch ID dia iray amin'ireo fiasa andrasana ao iPad 5 vaovao sy iPad Mini 2 vaovao izay mety hivoaka amin'ny volana oktobra.
Fanazavana fanampiny - Tamin'ny 15 Oktobra dia afaka nahita keynote vaovao Apple isika
Loharano - Chaos Computer Club
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izy ireo dia mahavita mamily ny rafitra fiarovana ID Touch an'ny iPhone 5S
Ity vaovao ity dia tsara ho an'ny applehaters an-tapitrisany maro mba hifalifaly 5 minitra.
Miverina amin'ny zava-misy ankehitriny, raha mila ny dian-tànanao amin'ny 2400 dpi ilay mpijirika mba hahafahany manao zavatra, inona izany hacking M. Rehefa mandingana an'io fiarovana io ny mpijirika nefa tsy manana fampahalalana an'ny tompony akory, dia hiasa saina ihany koa aho.
Amin'ny lafiny iray hafa izay avy amin'ny perla mankany Apple hanatsarana ny rafitra. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny "tiana" loatra ka hitan'izy ireo ianao hadisoam-piarovana malalaka.
Hipoitra ao anaty lasopy mihitsy aza ny vaovao, ho hitanao ... Ary ny tena ratsy indrindra dia ny hoe "hanao fanazavana diso" toa ny mahazatra foana izy ireo.
Diego Jose Pablos Sanchez dia hoy izy:
Fa raha ny hany zavatra nataon'izy ireo dia ny maka tahaka ny dian-tongotra amin'ny taratasy soritra. Tsy lavitra ny fanapahana hack ity! Sokafy ny masonao azafady.
Valiny tamin'i Diego José Pablos Sánchez
Mino aho fa efa nohazavaiko tao amin'ny lahatsoratra, indroa: TSY hacking io, mamitaka, tsy misy intsony.
MAZAVA mametraka azy ao anaty lahatsoratra, tsy mijirika ... mila mamaky ny namako ianao
Saingy heverina fa tsy mandeha izany raha notapahin'izy ireo ny rantsan-tànanao ary nanandrana nampiasa azy…. Ahoana ny fomba fiasa amin'ny "lasitra"?
Satria mampiasa ny bobongolo eo amin'ny rantsan-tananao ianao ary raha mamokatra toha herinaratra ny rantsan-tananao dia tsy manao izany ny rantsantanan'ny maty.
Raha ny fahazoako azy dia manoratra ireo faritra anatiny ao amin'ny dian-tànana ny sensor ary izany no antony niheverana fa tsy afaka mamoha ny iPhone ny rantsantanana tapaka. Raha izao dia hita fa ny "photocopy" an'ny dian-tànana dia azo vohaina, aiza daholo ireo voalaza etsy ambony ireo? Raha toa ka 2400 dpi ny "photocopy" an'ny dian-tànana dia mbola tsy hisy ao anatiny ny sosona anatiny, ka….
Raha ny marina, ny rantsantanana tapaka dia tsy mandeha amin'ny alàlan'ny famakiana ny sosona anatiny amin'ny rantsantanana, satria tsy miova ireo, dia satria tsy mamokatra sahan'aratra toy ny olona velona izy, noho izany antony izany no tsy maintsy hampiasana ny bobongolo amin'ny rantsantanan'ilay olona. . Ny famakiana ireo sosona anatiny ao amin'ny hoditra dia toa tantaraiko amin'ny varotra, tsy haiko tsara, fa manome ahy ny fiheverana fa ampy fotsiny ny maka tahaka ny dian-tongotra sy mamokatra sahan'aratra, izany hoe mampiasa ny rantsananan'ny olona velona rehetra. amin'ny bobongolo. Raha mbola misy ny zava-misy dia sarotra be ny miditra an-tariby amin'ity fomba ity.
Fanontaniana iray ... ahoana no ahafahako mamela ny findaiko any amin'ny vadiko hanao antso raha mila ny RATSIKO hamoha izany ???
Safidy iray hafa ny rantsantanana. Azonao atao ny mampiasa ny fomba rehetra
Ny fiainana koa.
eny fa avy eo inona re izany!
Ka mbola tsy misy safidy "scan" rantsan-tànana roa ... ????
Nisy tolo-kevitra iray tonga tao amin'ny Apple ho an'ny fanavaozana ny IOS7 manaraka, tompokolahy!
Maro ny rantsan-tànana azo scanina tsy misy olana.
Avy amin'ny olona samy hafa?
Namaly ny tenako aho taorian'ny nikarohako ny internet: mamantatra ny dian-tanan'ny 5 isan-karazany izany.
Izay novakiako raha hainao. Raha misy tompona tsara vintana afaka manazava izany amintsika, dia lavorary izany.
Motocross Elite, lalao môtô mahafinaritra sy tsotra